संसारकै महंगो साडी देखि नेपाली बजारमा पाइने साडीको मूल्य कति ? – Makalukhabar.com
संसारकै महंगो साडी देखि नेपाली बजारमा पाइने साडीको मूल्य कति ?
साउन २२, काठमाडौं । आइपुग्नै लाग्यो तीज । नयाँ साडीमा कम्मर मर्काउँदै नाँच्ने योजना तपाइको पनि होला । अरू बेला कुर्ता-सलवार वा टिसर्ट-पेन्ट नै सजिलो ठान्ने किन नहुन, तीजमा भने साडीको रहर देखाइ छाड्छन् । यो बेला ‘टिपिक्क स्कट’ वालाहरू पनि टिलिक्क साडीका अगाडि फिक्कै देखिन्छन् । तीज नारीहरू रमाउने चाड मात्र कहाँ हो र व्यापारीहरूले कमाउने मौका पनि हो । तीजलाई लक्षित गरी करोडौँका साडी बजार भित्रिन्छन् । परम्परा धान्न र मनको रहर मेट्न मात्र होइन, तडक भड्क देखाउन नै बजारमा अनेक खाले साडीको माग हुन्छ । थरी थरीका माग पुरा गर्न व्यापारीहरूले पनि थरी थरीकै साडी भित्राउँछन् ।
साडीको बजार मूल्य
काठमाडौंका बिक्रेताका अनुसार अहिले बजारमा ८ सय देखि ३० हजार रूपैयाँसम्मका साडी उपलब्ध छन् । बनारसी, सिफन, प्रिन्टेड, नेट, सिल्क जस्ता साडीहरू बजारमा छन् । जापानीज साडी भनेर चिनिएका सिफन साडी सबैभन्दा महंगा छन् । सिफन पछि बनारसी साडीको भाउ चर्को छ । त्यसो त रेडिमेड साडी मात्र होइन अर्डर अनुसार बुट्टा र धातु जडित साडी पनि काठमाडौंमै बन्ने गरेका छन् । साडीमा बुट्टा भर्नकै लागि ठुलो संख्याका भारतीयहरू राजधानीका कार्यरत छन् ।
नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकामा मुख्य प्रचलनमा रहेको साडी जस्तै मिल्दा जुल्दा लुगा भने अरू एसियाली संस्कृतिमा पनि भेटिन्छन् । हिन्दु र बौद्द ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएका आधारमा साडी लगाउने प्रचलन ४ हजार वर्ष भन्दा पुरानो भएको ठानिन्छ । पछिल्लो समय दक्षिण एसियाबाट साडीको चलन संसारभर फैलिदै गएको छ ।
अमेरिकाको न्युयोर्कमा सन १९७० मै भारतीयहरूले साडीको व्यापार सुरू गरेका थिए । भारतको गत वर्षको टेक्सटायल मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार १ करोड १० लाख व्यक्ति साडी सँग सम्बन्धित व्यवसायमा निर्भर छन् ।
साडीबारे रोचक कुरा
– पुरै शरिरसम्म नै ढाक्न मिल्ने एउटै पिसको लुगा हो साडी
– लगाउने एउटै मात्र तरिका छैन्, संसारभर सयौं तरिकाले साडी लगाइन्छ
– साडी लगाउन कुनै तुना, पिन, टाँकको साहरा लिनु जरूरी छैन
– वंलादेशका महिलाको राष्ट्रिय पोसाक साडी हो
संसारकै महंगो साडी
सन २००८ मा भारतको चेन्नेइमा ६० लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरमा बिक्री भएको एउटा साडी नै संसारको सबैभन्दा महंगो साडीको रूपमा गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा छ । चेन्नेइ सिल्क नामक कम्पनीले उत्पादन गरेको यो साडी ११ प्रकारका धातुहरू मिसाएर कलाकार राजा रवि बर्माले डिजाइन गरेका थिए ।
यो साडीमा ६० ग्राम सुन, ४ क्यारेट हिरा, १ सय २० मिलिग्राम प्लेटेनियम, ५ ग्राम चाँदी लगायत मुल्यवान धातुको समिश्रण थियो । ‘विवाह पटु’ नाम राखिएको यो साडीको तौल ८ केजी थियो । कुवेतका एक व्यापारीको अर्डरमा निर्माण गरिएको यो साडीको खरिदकर्ताको नाम अहिलेसम्म गोप्य नै छ ।
झन्डै यति नै मुल्य बराबरको साडी लगाएर भारतीय धनाड्य मुकेश अम्बानी पत्नी निता अम्बानी रिलाइन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीका छोराको बिहेमा सन २०१५ मा सहभागी भएकी थिइन् ।
काठमाडौंमा कहाँ किन्ने ?
काठमाडौंको व्यस्त दिनचर्यामा एउटै सामानको खोजीमा धेरै ठाउँ चहार्ने फुर्सद तपाइलाई छैन् । कहाँ जाने र कति खर्चिने भन्ने निर्णय गर्न सहज होस् भनेर हामीले तपाइलाई केही मुख्य स्थानमा घुमाउने प्रयास गर्दै छौं ।
सरुज बुटिक (इन्द्रचोक)
बनारसी- १ हजार ७ सय देखि ३ हजार ५ सय
प्रिन्टेड- १ हजार ६ सयदेखि २ हजार २ सय
नेट साडी- ५ सयदेखि ९ हजार
सिल्क साडी- १ हजार ६ सयदेखि २ हजार २ सय
आउनुस् अब असन बालकुमारी मन्दिर छेउमा रहेको सन्देश साडी पसल जाऔं । पसलका सन्देश रौनियारका अनुसार यहाँ १ हजार ५ सयदेखि ५ हजार सम्मका साडी छन् ।
सन्देश साडी पसल (असन बालकुमारी)
बनारसी साडी- १ हजार ५ सयदेखि ५ हजार
सिफन साडी- २ हजार ५ सयदेखि ५ हजार
सिल्क साडी- १ हजार ५ सयदेखि ३ हजार ५ सय
प्रिन्टेड साडी- ७ सयदेखि १ हजार ५ सय
असन बालकुमारी मन्दिरकै छेउको अर्को साडी पसल- जोशी साडी पसलमा छिर्यौं । त्यहाँ ७ सय देखि साढे १२ हजारसम्मका साडी रहेको संचालक राजेन्द्र जोशीले बताए ।
जोशी साडी पसल (असन बालकुमारी)
बनारसी साडी- ४ हजार ५ सयदेखि १ हजार २ हजार ५ सय
सिल्क साडी- १ हजार ६ सयदेखि ५ हजार ५ सय
धोती- ४ सयदेखि २ हजार
रातो साडी लगाएका महिलाहरु जति सुन्दर र आकर्षक देखिन्छ, त्यति नै साडीको प्रकार र मूल्य विविधताले हामीलाई पनि आकर्षित गर्दै लग्यो । यसैक्रममा पसियो असन चोकको रबि साडी एण्ड कुर्ता पसलमा ।
रबि साडी एण्ड कर्ता पसल (असन)
बनारसी साडी- २ हजार ५ सयदेखि १ हजार ५ हजार
सिफन साडी- ३ हजार ५ सयदेखि ८ हजार
सिल्क साडी- १ हजार ५ सयदेखि ५ हजार
प्रिन्टेड साडी- ६ सयदेखि २ हजार
असनका २/४ वटा पसल घुमेपछि भोटाहिटीका पसलमा पनि हेर्ने मन लाग्यो । ग्राहकको धेरै भीड भएको पसलमा छिरेर सोध्दा हामीलाई जानकारी दिने फुर्सद बिक्रेताहरुलाई थिएन । उनीहरु प्रश्न सोध्नेको जवाफभन्दा साडी देखाउनमै बढी ब्यस्त हुँदैथिए । तैपनि हाम्रो पनि खास उद्देश्य थियो । त्यो उद्देश्य साडीको मूल्य र प्रकारबारे पाठकलाई जानकारी दिने । यसै क्रममा भोटाहिटीकै राहूल कुर्ता एण्ड साडी कलेक्सनमा पुगियो । सो पसलमा ८ सयदेखि २५ हजारसम्मको साडी पाइने संचालक सम्राट रौनियारले जानकारी दिए ।
राहुल कुर्ता एण्ड साडी कलेक्सन (भोटाहिटी)
बनारसी साडी- ४ हजार ५ सयदेखि १२ हजार ५ सय
सिफन साडी- ८ सयदेखि २ हजार ५ सय
बुटिक साडी- १ हजार ५ सयदेखि २५ हजार
प्रिन्डेट साडी- १ हजारदेखि ३५ सय
सिल्क साडी- २ हजार ५ सयदेखि १० हजार
भोटाहिटी पछि हामी लाग्यौं शुक्रपथतिर यहाँका नाम चलेका पसलहरूमा साडीको मुल्य र प्रकार यस्तो भेटियो ।
आरती साडी शो रुम (शुक्रपथ)
बनारसी साडी- ८ सयदेखि ४ हजार ५ सय
पि्रन्टेड साडी- ८ सयदेखि १ हजार ६ सय
सिल्क साडी- २ हजार ५ सयदेखि १२ हजार
सिफन (जापानिज) साडी- १ हजार ५ सयदेखि ३० हजार
कोशी साडी पसल (शुक्रपथ)
बनारसी साडी- ५ हजारदेखि १२ हजार
सिफन साडी- १ हजार ५ सयदेखि ५ हजार
प्रिन्टेड साडी- १ हजारदेखि १ हजार ५ सय
सम्झना इपोरियल (शुक्रपथ)
सिफन साडी- २ हजारदेखि १३ हजार
सिल्क साडी- १ हजार ५ सयदेखि १० हजार
प्रिन्टेड साडी- १ हजारदेखि ३ हजार
नेट साडी- २ हजारदेखि १२ हजार
जय माता दी माया देवी ट्रेडर्स (इन्द्रचोक)
बनारसी साडी- ४ हजार ५ सयदेखि ९ हजार
सिल्क साडी- २ हजारदेखि ३ हजार
सिफन साडी- ५ सयदेखि ८ हजार
प्रिन्टेड साडी- ८ सयदेखि १ हजार २ सय
साडी पसल (असन बालकुमारी)
बनारसी साडी- २ हजारदेखि ५ हजार ५ सय
सिल्क साडी- १ हजार ५ सयदेखि ३५ सय
प्रिन्टेड साडी- ८ सयदेखि १ हजार ५ सय
हामीलाई थाहा छ, तपाइ धेरै स्मार्ट हुनुहुन्छ । साडीको मोटामोटी प्राइस रेन्ज यो भएपनि यसमा फेरि बार्गेनिङ गर्न भने नबिर्सनुहोला, जुन बजारको चलनै जस्तो बनिसकेको छ । बुटिकमा साडी किन्दै हुनुहुन्छ भने यो भन्दा फरक मूल्य पनि पाउन सक्नुहुन्छ ।